MLBB စိန်ဝယ်ပြီး 11.11 မှာကံစမ်းလိုက်ပါ! | November 2021
Home Games Mobile Legends MLBB စိန်ဝယ်ပ...
MLBB စိန်ဝယ်ပြီး 11.11 မှာကံစမ်းလိုက်ပါ!
MLBB စိန်တွေကို (၁၁)လပိုင်း၊ (၁၁)ရက်နေ့မှစတင်ကာ Codashop Myanmar မှာ MPT ဖုန်းဘေလ်နဲ့ ဝယ်ယူပြီး ဘောနပ်စိန်တွေကံထူးနိုင်မယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်ဖြစ်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့ မှ (၁၅)ရက်နေ့ အထိ
နေ့စဥ် ကံထူးသူ (၁၀) ယောက်ကို ရွေးချယ်ပြီး (၅,၀၀၀)ကျပ်ဖိုးနှင့် ညီမျှသော MLBB စိန်များ လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကာလ (၅)ရက် အတွင်း စုစုပေါင်း ကံထူးသူ အယောက် (၅၀) ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Codashop Myanmar တွင် MPT ဖုန်းဘေလ်ကို အသုံးပြုပြီး MLBB ဂိမ်းအတွက် လိုအပ်သလောက် စိန်များဝယ်ယူလိုက်ရုံပါပဲ။ အနည်းဆုံးဝယ်ယူရမည့် ပမာဏကို သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ Codashop Myanmar တွင် MPT ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များအတိုင်း အောင်မြင်စွာဝယ်ယူခဲ့သော ဝယ်ယူမှု transaction တစ်ခုစီအတွက် ကံစမ်းခွင့်တစ်ကြိမ်ကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကံစမ်းထားသူများထဲမှ ကံထူးရှင်များကို Codashop Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများက မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဝယ်ယူရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် in-game ID အကောင့်များနှင့်တကွ ကံထူးရှင်များကို နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် Codashop Myanmar ၏ တရားဝင်ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ မှတဆင့် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆုလက်ဆောင်စိန်များကို ကံထူးရှင်ကြေညာပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ကံထူးရှင်များ ဝယ်ယူခဲ့သော MLBB in-game အကောင့်သို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုလက်ဆောင်များကို ငွေသားဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ အခြားအမျိုးအစားဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ခံပေးပို့ခြင်းများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။လက်ခံရရှိမည့် စိန်ပမာဏမှာ အကောင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ non-Myanmar account ဖြစ်ပါက သတ်မှတ်ထားသော စိန်ပမာဏ အပြည့်မရခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်တွင် Codashop Myanmar နှင့် MPT မှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
များများဝယ်လေ ကံထူးနိုင်ချေများလေဆိုတော့ အခုပဲ MLBB ဂိမ်းအတွက် စိန်တွေကို Codashop မှာ MPT ဖုန်းဘေလ်နဲ့ ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်…
MPT ဖုန်းဘေလ်နဲ့ MLBB စိန်ဝယ်ယူရန်
Previous articleဘယ် Mobile Legends ဟော်လိုးဝင်း Skin ကကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးလဲ?
Next articleSingle ဘဝကကျွတ်ဖို့ Tinder Gold လက်ဆောင်
IA November 30, 2021	At	11:41 pm
phyo htat November 30, 2021	At	12:21 pm
Ye Noung November 29, 2021	At	10:07 pm
Ye Noung November 29, 2021	At	10:06 pm
ID 107015464 (13292)
Suraj November 15, 2021	At	2:45 pm
Suraj November 15, 2021	At	2:36 pm
Aalok November 14, 2021	At	6:45 pm
not showing payment methods
gumjala November 15, 2021	At	6:25 pm
That’s not good. How come? Can you captureascreenshot and share with us?
myathein November 13, 2021	At	8:20 pm
Min aung November 13, 2021	At	3:55 am
Give me 5k pls
oakar November 13, 2021	At	1:07 am
khainghtoo November 11, 2021	At	8:13 pm
Jokergyi November 11, 2021	At	6:30 pm
Diamonds မ​ေရာက္​​ေသးဘူး !
Wai Lin Aung November 11, 2021	At	12:37 pm
nice ml lee
Say9 November 11, 2021	At	11:49 am
ko shine November 11, 2021	At	8:45 am
Labang San Aung November 11, 2021	At	12:43 am
gumjala November 11, 2021	At	12:44 pm
အယောက်(၅၀)‌တောင်ပေးမှာလေ ဘရားသားကလဲ 🙂